Sawirro: Barcelona oo ku guuleysatay Champions League. – SBC
Sawirro: Barcelona oo ku guuleysatay Champions League.
Kooxda Barcelona ayaa si awood leh ugu guuleystay koobta tartamada Yurub ee championska, kaddib markii 3-1 ay uga adkaadeen Juventus.
Ciyaarta oo ka dhacday garoonka kubadda cagta ee Olympic Stadium, ee magaalada Berlin ayaa aad u kululeyd waxayna lahayd xiiso.
Barcelona ayaa hogaanka ciyaarta qabatay kaddib Afr daqiiqo markii ay billaabatay, waxaana dhaliyay goolkii ugu horeeyay Ivan Rakitic, Meel sideed mitir u jirta shabaqa ayuu ka dhaliyay gooshaasi oo mar qura garoonka ruxay.
laakiin waxa ay barbardhac noqotay markii gool uu dhaliyay ciyaaryahan Alvaro Morata, hase ahaatee Luis Suarez ayaa soo celiyay hogaanka Barcelona,
kaddib markii gool uu dhaliyay asigoo laad qurux badan ka helay Lionel Messi, ka hor intuusan goolka sedaxaad dhalinin Neymar, daqiiqaddii ugu dameysay ee waqtiga dheeraadka ah ee ciyaarta lagu daray.